Ngaba ungasitshintsha isandi sesaziso seSkype? - I-Skype
Eyona > I-Skype > Izandi zomyalezo we-Skype-izisombululo ezinokubakho
Izandi zomyalezo we-Skype-izisombululo ezinokubakho
Ngaba ungasitshintsha isandi sesaziso seSkype?
VulaNyeyeencoko zakho kwiI-Skypekwaye ucofe kwimenyu yokugcwala kwikona esezantsi ekunene. Khetha iindlela zethoni yokukhala uze usete iringithoni yesiko. Khetha kwiimvumi zakho ezikhoyo kunyeuza kuyiva oko kudlala ixesha elizayo xa kuqhagamshelana nayewena.20 kweyeThupha. 2015
Igama lokuzimela ngo-2007
Nazi iindlela ezili-10 ezilungileyo zeSkype kwiingcebiso zeshishini kunye namaqhinga.
Wamkelekile kuQeqesho. NdinguJason Sele. I-Skype yeShishini sisixhobo esihle sokungabhidaniswa noHlelo lobuqu lweSkype.
Ushicilelo lweShishini luyilelwe imeko yendibaniselwano kwaye ineseti ebanzi yeempawu. Nazi ezinye iingcebiso kunye namacebo okwenza ukuba i-Skype yeShishini ikusebenzele. Inani1-Yenza iintlanganiso ze-Skype kwi-Outlook.
I-Skype yeShishini iqhagamshele ngqo kwi-Outlook. Konke okufuneka ukwenze kukucofa kwintlanganiso entsha ye-Skype xa ukwikhalenda yakho. U-Skype ubeka ngokuzenzekelayo iinombolo zakho zokucofa kunye nekhonkco kwintlanganiso yakho ye-Skype.
Vele ubeke abafowunelwa bakho ku Ku:, faka umgca wesifundo sakho uze ucofe u-Send. Inani lesi-2-Rekhoda iNtlanganiso kwi-1080p HD. Nje ukuba uqalise intlanganiso ye-Skype, unokucofa ichaphaza elichaphaza kwikona esezantsi ekunene kwaye uqalise ukurekhoda.
Oku kuya kurekhoda intlanganiso yakho kwi-720p. Ukuba ungathanda ukuseta isisombululo esiphezulu kuseto lwakho lweSkype, cofa ukurekhoda kwaye ujonge lo seto ye-1080p epheleleyo ye-HD. Inombolo 3 - Yahlula-hlula ifayile yePowerPoint.
Eyona ndlela yokwabelana ngefayile yePowerPoint enkulu kwi-Skype yeShishini kukuyilayisha kwilifu. Cofa uMxholo woKwabelana. Khetha Yabelana ngeefayile zePowerPoint.
Khetha ifayile yakho yePowerPoint kwaye iya kuyilayisha kwilifu. Ngoku olu xwebhu lungajongwa ngabanye ngaphandle kokulinda ukuba iifayile zakho zifakelwe. Nje ukuba uyilayishe, cofa indawo yokwabelana ngesiqulatho kwakhona kwaye ungaya ku ManageContent kwaye ulawule useto lwefayile.
Susa, vimba, yenza kufumaneke kuphela kubantu abathile nakwezinye iisetingi ezininzi. Inombolo 4-Ukuhlaziywa ngokuzenzekelayo kolwazi lobukho bekhalenda. KwiSkype yoSeto lweShishini phantsi koBuntu, yenza olu phawu lokujonga 'Hlaziya ubukho bam ngokusekwe kulwazi lwekhalenda yam'.
Oku kuyakuhlaziya abafowunelwa bakho kwaye kukwazise xa ukwintlanganiso. Unokukhetha ibhokisi yokukhangela ukuze wabelane ngolwazi olu kunye nabafowunelwa babucala okanye babucala. Inani lesi-5-Seta sukuphazamisa kwintlanganiso.
Ngaphantsi kweSkype kuseto lweShishini. Xa utshintshela kwimeko, kukho ukhetho 'Ndibonise ungaphazamisi'. Xa ndabelana nge desktop yam, sebenzisa oku ukwazisa abantu ukuba ukwintlanganiso kwaye abafuni kufumana iifowuni okanye imiyalezo ekhawulezileyo.
Inombolo 6 - vumela unxibelelwano lwangaphandle. Kwiziko lakho le-Office 365 lolawulo, cofa uSkype woShishino. Ngaphantsi koMbutho, cofa kunxibelelwano lwangaphandle.
Ukuba ukhetha le bhokisi yokukhangela, abasebenzisi baya kuba nakho ukusebenzisa i-Skype yeShishini ukunxibelelana nabasebenzisi be-Skype ngaphandle kombutho wakho. Oku kukuvumela ukuba ufumane kwaye uthumele imiyalezo ye-Skype kwangoko kubantu abangaphandle kwenethiwekhi yakho yangaphakathi. Ngokuzenzekelayo, oku kuyenziwa ngaphandle kwemimandla evaliweyo kwaye apha ngezantsi ungongeza nayiphi na imimandla ofuna ukuyithintela kunxibelelwano.
Inani lesi-7 - ukwenza ngokwezifiso izimemo zentlanganiso. Kwindawo enye yeziko lolawulo lweSkype kukho itab yeentlanganiso ezikwi-Intanethi. Kulapho ungenza khona uhlengahlengiso kwizimemo zakho zentlanganiso.
Unokwenza i-logo, unokongeza i-url kwifayile yoncedo, ungabandakanya i-url esemthethweni kwaye wenze umbhalo weenyawo oza kubonakala ekupheleni kwentlanganiso yakho ye-Skype. Olu lwazi luya kuvela phakathi kwale migca mibini idibeneyo kwisimemo sakho sentlanganiso. Inombolo yesi-8 - jonga idashboard yakho esemgangathweni wokufowuna.
Enye into eluncedo kwiziko lolawulo lweSkype yidashboard esemgangathweni yokufowuna. Ungafikelela kuyo ngokuya kwizixhobo, ucofa kwiSkype yeShishini kwiDashboard yoMgangatho weFowuni kwiShishini. Idashboard esemgangathweni yokufowuna iluncedo kuphela ukuba udibanise ukusebenza kwefowuni yeSkype kwi-Skype yakho yezeShishini.
Ibonisa iigrafu zomsebenzi weefowuni zakho nokuba umgangatho ulungile, umbi okanye awudalwanga. Ikubonisa imikhwa yenyanga kunye neyemihla ngemihla kwaye ikunika umbono olungileyo wokuba zingaphi iifowuni ezenziwayo kwinethiwekhi yakho nokuba umgangatho ukwanele na. Ukuba ubona indawo enkulu enonxibelelwano olubi, luphawu lokuba kukho into engalunganga kwinethiwekhi yakho okanye into echaphazele unxibelelwano lwe-intanethi.
Inombolo 9 - yongeza iinombolo zefowuni nezasekhaya, kuseto lweSkype phantsi kweefowuni kukho iinombolo zefowuni onokuzifaka. Uninzi lwexesha, olu lwazi luhlala kwiOfisi 365 okanye kuTshintshiselwano, kodwa ukuba ilahlekile, ungayincamathisela ngaphakathi kuwe. Yongeza inombolo yakho yefowuni, ikhaya, okanye nayiphi na inombolo yefowuni kwaye uyenze ifumaneke kwabanye abantu kwikhadi lokunxibelelana elibonisa ulwazi lwakho loqhakamshelwano.
Kwaye ekugqibeleni inombolo ye-10 - ukhetho lwentlanganiso. Ukuba ufuna intlanganiso esebenzayo ye-Skype, cofa iinketho zentlanganiso xa ufaka ikhalenda yakho. Ngaphantsi kogunyaziso unokukhetha ukuba ngubani ofuna ukumlinda kwigumbi lokungenisa.
Ukuba useta 'Kum nje, kumququzeleli wentlanganiso'
Ndisivula njani isandi sesaziso seSkype?
Izandi zikaSkypeinokuvulwa kwaye icinywe ngokulula.
QalisaI-Skype, cofa 'Izixhobo ' kwaye ukhethe 'Khetha ' kwimenyu ukuvula iI-SkypeKhetha iwindow.
Cofa 'Izaziso 'kwisahlulo sokuhambisa ngasekhohlo, emva koko ucofe 'Izandi ukujonga i -isandiuseto.
Cofa i 'Yenza isebenzekonkeizandi 'iqhosha kwiyenza izandiphakathiI-Skype.
Molo lo nguGary osuka kwiMacMost.com.
Namhlanje ndiza kukubonisa indlela yokulawula izaziso kwi-Mac yakho. IMacMost iziswa kuwe enkosi kwiqela elikhulu labaxhasi abangama-800 +. Yiya kwi-MacMost.com/patreon.
Unokufunda ngakumbi malunga nephulo lePatreon apho. Thatha inxaxheba kwaye ukhusele umxholo okhethekileyo kunye nezaphulelo zekhosi. Ke xa ufumana isaziso kwi-Mac yakho, iya kuvela kwikona ephezulu ngasekunene.
Kanye njengale. Oku kuya kuhamba emva kwemizuzwana embalwa. Jonga islayidi kwakhona ngaphakathi.
Abanye bangahlala kwaye ndizokubonisa ukuba ungayilawula njani ngomzuzu. Nje ukuba bemkile, banokufikelelwa ngokunqakraza umhla kunye nexesha kwikona ephezulu ngasekunene. Oku kuyakuzisa indawo yezaziso.
Iziko lezaziso linamacandelo amabini. Izaziso phezulu kunye namawijethi ezantsi. Ngoku zintathu izaziso ezibonisa apha, kodwa uyabona ukuba ndinesalathiso apha esixelela ukuba zininzi.
skype ukuvalwa kweakhawunti
Qaphela ukuba ezinye zezi zidwelisiwe. Umzekelo, uyabona ukuba kukho isaziso sekhalenda, kodwa kukho iqela lezaziso zezikhumbuzo kunye nezaziso zomyalezo. Ukuba ndicofa indawo ethi Okuninzi, uyabona ukuba kukho abanye apha, kubandakanya iqela elivela kwiwebhusayithi kunye nelinye elikwiScreen Time.
Ungasoloko uye ngasekunene kweZiko leSaziso apha kwaye kukho iqhosha elincinci elikuvumela ukuba uwe icandelo elingakumbi. Ukususa oku ngoku kulula kakhulu. Qaphela, ukuba ndiqengqa umntu, ndifumana u x kancinci kwaye ndinokwala.
Ndikwanazo nezonyuselo apha ngezantsi. Isenzo sixhomekeke kusetyenziso olukhupha isaziso. Ke nantsi ndinekhalenda yokusnuza iqhosha.
Iinkumbulo zinezinto ezahlukeneyo. Makhe ndicofe kweli qela lilapha ukuze ndibone zombini izaziso zesikhumbuzo. Uyabona ukuba kukho iqhosha lokukhetha apho.
Ndingacofa kuyo kwaye ukhethe ukhetho olukhethekileyo kwizikhumbuzo. Ezinye iiapps zinokukhetha ngeendlela ezahlukeneyo. Unokuklikha ubonise uMncinci apha ukuze uwahlasele kwiqela elinye.
Qaphela ukuba ngamanye amaxesha ndineqhosha elincinci apha kwaye kwakhona lixhomekeke kwiapp. Kwikhalenda, ndingacofa kuyo kwaye ndibone ulwazi oluthe kratya malunga nento ethile. Kukho amachaphaza amathathu apha kwaye ndingacofa kuyo kwaye ndibeke ezinye iinketho apha ngaphandle kokuya kukhetho lweNkqubo.
Ke ndiyakwazi ukukhubaza izaziso zekhalenda apha okanye sitsibe ngqo kuseto, esiza kujonga ngalo mzuzwana. Ndingacofa apha ukunciphisa oku kwakhona. Ukuba ndineqela elinje, ndingacofa iqhosha u-x apha ukuvala enye, okanye ndingacofa apha ukucima wonke umntu okwelo qela.
Makhe sijonge le miyalezo apha. Ndicofa kuyo kwaye uyabona ukuba ndinendlela yokulahla nganye nganye. Ndiyakwazi ukucima yonke into.
Ndinokukhetha apha njengokubonisa okuninzi, okuya kundivumela ukuba ndiphendule kanye apha kwiZiko leSaziso, okanye ndingakuphawula oku njengokufundiweyo. Ngoku, ukuba ufumana uninzi lwezaziso kwaye zihlala zisendleleni kwaye zikucaphukisa, ke ufuna ukuzilawula. Ukwenza oku, yiya kuseto lwenkqubo kwaye apho kwizaziso.
Uza kubona uluhlu lweeapps kunye neenkqubo zenkqubo ezisebenzisa izaziso. Khetha enye kwaye uza kubona ukhetho lwezaziso zalolu hlelo lokusebenza apha ngasekunene. Ungazinqanda ngokupheleleyo izaziso.
Umzekelo, masiye kwiMiyalezo kwaye ndingazicima izaziso zemiyalezo ngokupheleleyo. Ndingakhetha kwakhona isitayile sokulumkisa. Ndibona oku kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini xa ndenza umsebenzi wam kwaye ngesiquphe isaziso siyavela.
Ndingathi hayi, andifuni lonto. Ndifuna ukuba kwiziko lemiyalezo, kodwa andifuni ukuba indikhathaze ngenye indlela. Okanye ndingakhetha iibhanile.
Ngoku iibhena ziya kuvela kwaye ziya kunyamalala emva kwemizuzwana embalwa. Izilumkiso ziya kuvela kwaye zihlale apho de uthathe inyathelo. Unokukhetha nokuba ungababonisi okanye hayi kwiZiko leSaziso konke konke.
Ke ukuba ufuna ukubona isaziso esikhawulezayo esivela kwi-app, o.k.t. Umzekelo, ukuba usetyenziso lweMculo ludlala ingoma entsha kodwa awufuni iZiko leSaziso lixineke, ungayicima umculo.
Unokukhetha nokuba uyibonise okanye ungayibonakalisi kwiscreen sokutshixa. Ngaphambi kokuba ubhalise. Oku kubalulekile xa iapps ihlala ikunika ulwazi lwangasese.
Umzekelo, kwimiyalezo, usenokungafuni ukuba ivele kwiscreen sokutshixa. Ungayibona i-icon yeBheji yeapp apha kwiDock xa ibonisa inani elincinci, njengemiyalezo engentla ethi ndinemiyalezo emibini. Ukuba ndicima le miyalezo, ungabona ngoku ukuba andinayo inombolo apho.
Ndikwazile nokukhetha nokuba ndingadlali izandi zezaziso. Ndingazenza zibonakale zinjalo, kodwa ngokuzolileyo. Kukho ukhetho lokujonga kuqala.
Umzekelo, ndingabonisa ukuba ndinemiyalezo kodwa akukho myalezo wangaphambili. Ngokwamaqela, ndingazidibanisa ngokwamaqela, ngokwamaqela ngokwenkqubo, okanye kungabikho qela konke konke. Inqaku ngalinye likho ngokwahlukeneyo njengoko lalinjalo ngaphambili.
Kukho useto lwendalo yonke lokuboniswa komboniso. Qaphela ukuba oku kuyaboniswa xa kuvulwa (okungagqibekanga). Ewe, ukuba ndiyitshintshile le yaba 'Soloko', 'Soloko' ngoku yinto emiselweyo.
Ke unokuya kuzo zonke ii -apps ezivunyelwe ukuba zikuthumele izaziso kwaye zitshintshe inkangeleko yazo. Ngale ndlela unokususa izinto ezininzi ezicaphukisayo kwaye ube nezo zibaluleke kakhulu kuwe. Ngoku qaphela ukuba kukho iwebhusayithi ebhalwe apha.
Ndindwendwele iwebhusayithi endiyaziyo inezaziso. Ngoku amahemuhemu eMac enza yonke into ngokuchanekileyo. Kuya kufuneka ucele kwiwebhusayithi.
Awuyi kufumana esinye sezilumkiso ekucela ukuba wamkele izaziso ngalo lonke ixesha undwendwela indawo. Kodwa ngoku ndikwazile ukulawula izaziso zale webhusayithi apha. Unakho ukhetho lokwenza oku kwi-Safari.
Ungaya kwi-Safari, Useto, kunye neeWebhusayithi ukusuka apho, kwaye uya kubona uluhlu lwewebhusayithi ezivulekileyo kunye neewebhusayithi ovumele izaziso kuzo. Apha ungala okanye uvumele okanye ukhethe kwaye uyisuse ukuze kujongeke ngathi awuzange undwendwele le ndawo ngaphambili. Ngoku uyabona ukuba isiza asikho kuseto lwenkqubo.
Ke amanye amaqhinga apha kwiZiko leSaziso. Unokucofa ucofe okanye ucofe iminwe emibini kwitrackpad nangaliphi na ixesha ukufumana ukhetho apha, ukuhambisa ngokuzolileyo okanye ukucima ukhetho kwiqela ngalinye. Kwakhona, ukuba ufumana isaziso, nokuba sisibhengezo okanye isilumkiso, unganqakraza kwaye usihudulele ngasekunene ungathathi manyathelo.
Luhlobo nje lokuyifumana. Iya kuhlala ilapha kwiziko lemiyalezo. Ngoku nalapha kuseto lwenkqubo, Izaziso, into yokuqala ayisiyi-app, kodwa ezakho aziphazamisi useto.
Apha ungajika ngokuzenzekelayo ungaphazamisi ngokukhetha Ukusuka nokucwangcisa ixesha lokuvula kunye nexesha lokucima. Ungayivula xa umboniso ulele okanye xa isikrini sitshixiwe okanye xa usenza isipili kwiTV njengeprojektha. Ngamanye amagama, wenza intetho okanye ubukele umboniso weTV obonisa umoya kwi-AirPlay.
Unokuvula ungaphazamisi ngokucofa iZiko loLawulo apha kwaye ucofe ungaphazamisi. Ungayilayisha iyure, kude kuhlwe, kude kube ngomso, okanye ngokusisigxina. Ke ukuba ndiyayifaka xa ndifumana umyalezo omtsha, akukho nto yenzekayo.
iiakhawunti zeskype ezingeyonyani
Andiyi kuyivumela ukuba ivele apha. Kodwa xa ndicofa iZiko leZaziso ndikwazile ukubona ukuba umyalezo ufikile kum kwaye uyabonakala kwiZiko leSaziso. Khange ndifumane saziso kwiscreen apha kuba ndijikile andiphazamisi.
Unokongeza ngokusisigxina isibonisi esithi 'Ungaphazamisi' kwibar yemenyu ngokuya kwindawo yolawulo kwaye urhuqe 'Musa ukuphazamisa' kwindawo oyifunayo kwimenyu yebar. Ke ngoku unayo le nyanga incinci apha. Ungacofa kuyo ukuze uvule ungaphazamisi okanye ujonge imeko yangoku njengokuba ibiyiyo ngoku kwaye uyayibona ivuliwe.
Ndicinga ukuba lo ngumsebenzi ongenakuphepheka kuwo nawuphi na umsebenzisi we-Mac ukuba angene kwiiNkqubo ezikhethiweyo kwaye ajonge ukhetho lwakho, sebenzisa iiapps zakho kwaye uzilungelelanise. Ngaphandle koko, unokufumana izaziso ezininzi kwaye zisendleleni, okanye ngekhe ufumane izaziso ezaneleyo. Njengokuba ungazi xa ufumana imiyalezo emitsha ngaphandle kokuba ujonga.
Izaziso ziyinxalenye eluncedo kakhulu yokusebenzisa iMac yakho, kodwa kuya kufuneka uyilawule ukuze ufumane okuninzi kubo.
Ndisitshintsha njani isandi sam seSkype?
Cofa uIsandiIqhosha leseto.
KwiIsandiibhokisi yencoko yababini, cofa indawoIzandiithebhu.
Phantsi kweziGaneko zeNkqubo, skrolela ezantsi ukuyaI-SkypeyeShishini.
Cofa umsitho (njengokuPhela kweMnxeba, umzekelo).
KwiIzandiuluhlu, cofa uisandiifayile. Ukuyiva, cofa Uvavanyo.
Ndilonyusa njani ivolumu yokwazisa ngeSkype?
Sebenzisa eyakhoisandi, Cofa u 'Ngenisa ngaphakathiIzandi, cofa kabini kwifayile yeaudiyo ukongeza ifayile yeisandiKwisiko LamIzandiuluhlu kwaye ukhethe ifayileisandiUkusuka 'Khetha ukuba yeyiphiIsandiUkudlala 'ibhokisi yokwehla. Sebenzisa okungagqibekangaizandi, klikha kwiqhosha 'lokuseta kwakhona konke ukuba kungagqibeki ' emva koko ucofe 'Gcina. '
Kule nqaku siza kujonga indlela yokusetha i-audio kwifowuni ye-Skype.
Ke ukuba awukhuphelanga i-Skype unokukhuphela iMat kwiwebhusayithi ka-Skype kwaye kufuneka ukwazi ukuyifaka nakweyiphi na ikhompyuter enesimo somsebenzisi ophambili kwiakhawunti yakho yasimahla ikwakhona kwiwebhusayithi yeSkype, awunyanzelekanga ukuba Bhatala iifowuni zeSkype, ukuba ubiza umntu ngeakhawunti ye-Skype ukuze ungene kwi-Skype kwaye xa ungene kwi-Skype uza kubona iscreen esingagqibekanga kwaye ngasekhohlo uza kubona bonke abafowunelwa ungongeza abafowunelwa ngokusebenzisa i-Skype. Sebenzisa iqhosha longeza umnxibelelwano elivela kwikona ephezulu ngasekunene kuluhlu lwabafowunelwa ngaphambi kokuqhagamshelana nabani na. Ngenxa yoko kufuneka usete umsindo wakho. Yiya kwiZikhetho zeZixhobo uze ukhethe useto lweaudio kwiiSeto seAudio Kukho ukhetho lweMakrofoni kwaye kufuneka ukhethe ukuba yeyiphi na imakrofoni ofuna ukuyisebenzisa.
Ndidibanise ii-microphone ezahlukeneyo kwezi ze-nebulizers ezikhethekileyo ukubonisa into onokuyibona kumthi womthi. Eyokuqala yimakrofoni ye-H2 u-Alice yimakrofoni ekhethekileyo eyimakrofoni yangaphandle edibanisa ngentambo ye-USB kwaye yimakrofoni elungileyo kakhulu kwiimeko zeqela kwaye ikwasisikhokelo semakrofoni esichazayo esinemakrofoni elungileyo kakhulu kwaye ezilungele abantu ukuba basebenzise ungasebenzisa imakrofoni eyakhelwe kwikhamera yewebhu eyimakrofoni yenjongo ngokubanzi kodwa unokufumana ingxelo encinci okanye isandi esivela komnye umntu onditsalela umnxeba ukuba urekhode izithethi kwaye ekugqibeleni olunye uhlobo lombhobho yeyona uyiplagi ngaphambili kwikhompyuter yakho ngonxibelelwano lwejack. Oku kuyakudweliswa njengemakrofoni kunye negama lekhadi lesandi kule meko bubuchwephesha bokwenene ke khetha umboko wakho ngokufanelekileyo kwaye uyivale emva koko uqalise skype kufuneka uqhagamshele yonke into ngaphambi kokuba uqale skype ufuna ukukhetha ngokuzenzekelayo Ukuba nezicwangciso ezilungelelanisa ngokuzenzekelayo ivolumu ukuze zingqamane nezithethi yenye into ekufuneka uyijongile kuba xa usebenzisa iseti yentloko yakho ufuna ukuqinisekisa ukuba omnye umntu ophetheyo uza kwi-headset kunokuba izithethi zokubeka esweni uluhlu azifuni ukuza ngemakrofoni yakho ye-H2 Unokufuna ukuba ihambe kwi-headset yakho ye-USB okanye izithethi zeRealtek ezinokuba zijonga xa ungena okanye inokuba sisixhobo sejack ngaphambili kwaye emva koko unokufumanisa ukuba imakrofoni yakho yakudala Chwetheza iqhosha lokudlala eliluhlaza ukuvavanya ukuba zeziphi izithethi ezisetyenzisiweyo ngoku.
Xa usebenzisa ezi zithethi kwiliso lakho kufuneka uqiniseke ukuba akukho sandi okanye ingxelo, kwaye ngekhe uyifumane de ube uqala umnxeba wokwenyani nomntu wokwenyani, ke kuya kufuneka uqiniseke ukuba imic yakho ikude izithethi kwaye ukuba lo mntu umbizayo uxela ukuba kuninzi kakhulu okanye bafumana impempe, isandi sokukhala, kuya kufuneka usicime isithethi ukunciphisa isandi. Kuya kufuneka ususe imakrofoni kwisithethi. Ke xa ujongile useto lwakho lweaudio, cofa kuseto lweVidiyo kwaye apho uya khona, ungavavanya isixhobo sakho ukuba ngaba i-webcam yakho iyasebenza kwaye xa sele ukulungele ukubetha nje ngezantsi kwaye ngoku ukulungele ukwenza into elungileyo Phambi kokuba uqhakamshelane nomntu usebenzisa inkonzo yovavanyo ye-Echo efumanekayo kuluhlu lwakho loqhakamshelwano, khetha ngokulula inkonzo yokuvavanywa kwee-Echosounds emva koko ucofe iqhosha lokufowuna kwaye uya kumenyelwa ukurekhoda umyalezo wovavanyo.
Landela nje imiyalelo oyivayo ngenkonzo yovavanyo xa ugqibile ngovavanyo lokurekhoda. Emva koko unokuphelisa umnxeba ukuze usete apho ngeSkype. Kukho ezinye ezisebenza nguSlyke, ukuba usebenzisa i-headset ye-jack enesandisi sentloko ye-jack ungadinga ukwandisa inzuzo yemakrofoni kwaye kufuneka ubukele inqaku liphela ngendlela yokwenza o
Ungasiva njani isandi somnxeba kwi-Skype?
1 Cofa iqhosha leSeto seSandi. 2 Kwibhokisi yencoko yencoko yababini, cofa Izandi ithebhu. 3 Phantsi kweziganeko zeNkqubo, skrolela ezantsi kwi-Skype yeShishini. 4 Cofa umsitho (njengokuPhela kweMnxeba, umzekelo). 5 Kuluhlu lwezandi, cofa ifayile yesandi. Ukuyiva, cofa Uvavanyo.
Ndizitshintsha njani izandi zesaziso kwi-Skype yeWindows?
Iinguqulelo ezindala zeSkype ungazitshintsha zibe zizandi ezizizo. Ndisebenza ubusuku bonke ndenza imveliso yamaTshayina evela e-US. Bendihlala ndikwazi ukulala kwaye ndibeke isandi esisesikweni sokundivusa ukuba imiba yenzekile ebusuku. Isandi ngoku sibuthathaka kangangokuba akukho ndlela yakuvuswa. Nceda wongeze eli nqaku ngokukhawuleza okukhulu ukuze ndiqhubeke nomsebenzi wam.
Indlela yokusetha izandi ezithile kwi-Skype kwishishini?
Cwangcisa izandi ezithile 1 Cofa iqhosha leSeto seSandi. 2 Kwibhokisi yencoko yencoko yababini, cofa Izandi ithebhu. 3 Phantsi kweziganeko zeNkqubo, skrolela ezantsi kwi-Skype yeShishini. 4 Cofa umsitho (njengokuPhela kweMnxeba, umzekelo). 5 Kuluhlu lwezandi, cofa ifayile yesandi. Ukuyiva, cofa Uvavanyo.
Ndiwufumana njani umculo oza kuwudlala kwiSkype?
Emva koko ucofe iqhosha lokuKhangela ukuze uye kwifayile yomculo ongathanda ukukuva. Cofa iqhosha leSetingi. Kwibhokisi yencoko yencoko, cofa Izandi ithebhu. Ngaphantsi kweziganeko zeNkqubo, skrolela ezantsi kwi-Skype yeShishini. Cofa umsitho (njengokuPhela kweMnxeba, umzekelo).